November 2019 – News Portal
आज मतदान् उपनिर्वाचन
November 30, 2019 epradeshLeaveaComment on आज मतदान् उपनिर्वाचन
दाङ, १४ मंसिर । उपनिर्वाचनको दाङमा सबै तयारी पूरा भएको छ । अब मतदान गर्ने काम मात्रै बाँकी रहेको निर्वाचन कार्यालयले बताए । सबै तयारी सम्पन्न भैसकेको निर्वाचन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले जानकारी दिए । निर्वाचनको तयारीसम्बन्धी रिपोर्टर्स क्लव दाङले शुक्रबार श्रीगाउँमा आयोजना गरेको पत्रकार समेलनमा बोल्दै निर्वाचन समितिका संयोजक रिजालले सहज र सुरक्षित एवं […]
अधिकारकर्मी नै हिंसामा
November 30, 2019 epradeshLeaveaComment on अधिकारकर्मी नै हिंसामा
तुलसीपुर, १३ मंसीर । विन्दु शर्मा बिगत पाँच वर्षदेखि महिला अधिकारको क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै आइरहेकी छन् । महिला अधिकारका लागि काम गर्दै गर्दा उनी पनि हिंसामा पर्ने गरेकी छन् । पीडितले उजुरी दिएकै आधारमा पीडक पक्ष शक्तिशाली बन्न खोज्दा आफूहरू पनि जोखिममा पर्ने गरेको उनको भोगाइ छ । संस्थामा कोही कसैले उजुरी लिएर आएको छ भने पीडकले आफ्नो […]
November 30, 2019 epradeshLeaveaComment on मैले नेपाललाई चिनाए तर नेपाले चिनेन
तुलसीपुर, १४ मंसिर । श्याम रोका लामो समयदेखि सितोरियो कराँतेका खेलाडी हुन् । उनी गत कार्तिकमा मात्र मलेसियामा सितोरियो गोजुरियो इन्टरनेसनल कराते प्रतियोगितामा द्वितीय स्थान हासिल गरे । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेल खेल्नका लागि मलेसियामा पुगेका रोकाले द्वितीय स्थान हासिल गरेपछि नेपालको प्रतिष्ठा विश्वमा बढाए । मलेसियामा खेल खेल्नका लागि आफ्नै करिब ३ लाखको लगानीमा मलेसिया पुगेका उनले द्वितीय स्थान हासिल […]
November 30, 2019 epradeshLeaveaComment on भिकारीको प्रेम कथा
समिप यात्री हाम्रो देश नेपाल सुन्दर शान्त विशाल । आहा ! सुन्दा कति आन्नद लाग्छ अनि गर्ब पनि उत्तिकै वीर गोर्खालीको नामले । म त्यही रम्छु जहाँ फुलको बास्ना मग्मगाउँछ । म त्यही बाटो गोरेटोसँग मितेरी गाँस्छु जहाँ म ढुङ्गालाई नरम शिरानी र बाटोलाई कोमल बिस्ताराको रूपमा एक डिल्पिल स्वच्छ सपनीको कामना गर्दै जिउँछु । मेरो जीवन निर्वाह हरदिन […]
November 30, 2019 epradeshLeaveaComment on कार्यप्रगतिको बारेमा जानकारी
घोराही, १४ मंसिर । घोराही उपमहानगरपालिका न्यायीक समितिले सम्पादन गरेका कार्यप्रगतिको बारेमा जानकारी गराएको छ । न्यायीक समितिले शुक्रबार घोराहीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जानकारी गराएको हो । न्यायीक समितिका संयोजक सीता सिग्देल न्यौपानेले साउन महिना विगत चार महिनाको अवधिमा १३ वटा लेनदेनको मुद्दा परेको जानकारी गराएकी थिइन् । त्यसमा पाँचवटाको मिलापत्र अन्तिम भएको र आठवटा प्रक्रियागत रूपमा रहेको […]
November 30, 2019 epradeshLeaveaComment on दुई स्थानमा मतगणना हुने
घोराही, १४ मंसिर । दाङमा दुई पदका लागि हुने उपनिर्वाचनको मतगणना दुई छुट्टाछुट्टै स्थानमा हुने भएको छ । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को ‘ख’ प्रदेश सदस्य र घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ मा वडा अध्यक्ष पदका लागि हुने उपनिर्वाचनको मतगणना छुट्टाछुट्टै स्थानमा हुने भएको हो । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ को मतगणना दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको परिसरभित्र […]
प्राङ्गारिक खेती एक परिचय
November 29, 2019 epradeshLeaveaComment on प्राङ्गारिक खेती एक परिचय
बबि बस्नेत कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन गर्दा रासायनिक मल तथा विषादीहरूको प्रयोग नगरी प्राङ्गारिक वस्तुको मात्र प्रयोग गरी तथा कृषि पर्यावरणलाई सन्तुलित राखी खेती गर्ने प्रविधिलाई प्राङ्गारिक खेती भनिन्छ । यस प्रविधिले प्रति इकाई जग्गामा बढी उत्पादन गर्नेभन्दा दीगो कृषि उत्पादनमा जोड दिन्छ । साथै प्राङ्गारिक खेतीले कम्पोष्ट मलको बढी प्रयोग, प्राकृतिक रोग व्यवस्थापन, बाली विविधिकरण, वातावरणीय […]
November 29, 2019 epradeshLeaveaComment on प्रविधिले बालविवाह रोक्न चुनौती
दाङ, १३ असोज । रूकुमका रमन केसी घोराहीमा अध्ययन गरिरहेका छन् । घोराहीमा अध्ययन गर्दै आएका रमनलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एकदिन एक अपरिचित युवती पूजाबाट फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आयो । रोल्पा घर भएर घोराहीमा बस्दै आएकी ति युवतीले फेसबुकमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएपछि रमनले पनि उनको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरे र फेसबुकमा साथी बनाए । रमन र पूजा (नाम परिवर्तन) ती युवतीबीच […]
तुलसीपुर, १३ मंसिर । समाजवादी पार्टी अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लव दाङले बिहीबार तुलसीपुरमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष भट्टराईले दलहरूको भागबण्डामा बनेको आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताए । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारको भूमिका कमजोर देखिएको छ’ उनले भने– ‘अख्तियारले साना माछालाई समाते पनि ठूला माछालाई […]
November 29, 2019 epradeshLeaveaComment on राप्ती बबईको ३०औं स्थापना दिवस
तुलसीपुर, १३ मंसिर । पश्चिम दाङको शैक्षिक क्षेत्रको रूपमा रहेको राप्ती बबई क्याम्पसको ३०औँ स्थापना दिवस मनाइएको छ । स्थापना दिवसको अवसरमा पूर्व विद्यार्थी समाजले रक्तदान तथा मुखको स्वास्थ्यसम्बन्धी एकदिने कार्यक्रमको आयोजना गरी स्थापना दिवस मनाएको हो । ३० वर्ष अघि आजकै दिन क्याम्पसको स्थापना भएको थियो । राप्ती बबई क्याम्पस पूर्व विद्यार्थी समाजका संयोजक रञ्जन कोइरालाको अध्यक्षता तथा […]